Goodayyaa suuraa Ministiroota Kaataalaan afur poolisiitti harka kennatan
Hogganaan duraanii Kaataalaan Kaarles Pujidamoonii fi minsitiroonni duraanii afur abbaa seeraa Beljiyeem dhimmicha qorataniin bilisa akka bahan murtaa&apos;e.
Abbaan seeraa kuni akka jedhanitti hoggantoonni duraanii eeyyama malee biyyaa bahu hin danda&apos;an.
Haga dhaddachi haqaa Ispeen jiraatutti hin deebi&apos;u jedhani ture.
Hoggantoota kana Ispeenitti dabarsite kennuuf Beljiyeem guyyoota 60 qabdi, seera irratti mormiin yoo hin dhiyaanne garuu isa dura dabarfamani kennamuu danda&apos;u.
&apos;&apos;Waajjira abbaa-alangee Biraasalsin waaree booda gaafatameen namoonni hunduu yeroof akka hidhaadhaa gadhiifaman abbaan seeraa dhimmicha qorataan eyyamaniiru,&apos;&apos; jedha ibsi waajjira abbaa-alangee Beljiyeem.
Goodayyaa suuraa Obbo Pujidamoon waajjira abbaa alangee Biraasals keessatti mul&apos;ataniiru
Dhaabni siyaasaa obbo Pujidamoon akka jedhetti of-dabarsani poolisiif kan kennan &apos;&apos;adeemsa seeraa baqachuuf osoo hin taane falmachuufi. Kunimmoo Ispeenitti shakkisiisaa ta&apos;uus Beljiyeemiti ta&apos;uu danda&apos;a.&apos;&apos;
Goodayyaa suuraa Deeggartoonni bilisummaa Kaataalaan waajjira abbaa alangee Biraasals fuuldura mormaa turani
Hoggantoonni shanan poolisii federaalaa Beljiyeemiif harka kan kennan yoo ta&apos;u abukaatoowwan isaaniis waliin jiru.
&apos;Magaalaa Finfinnee itti gammadee, itti booneen tajaajila&apos;
Iraan basaastota CIA irratti du&apos;a murteessite
Ronaaldoon dhimma &apos;gudeeddiin&apos; hin himatamu jedhame
&apos;&apos;Murtee dhumaa eeggachaa jirra,&apos;&apos; Beteliheem Abarraa
&apos;Itoophiyaatti olaantummaa seeraa kabachiisuun ajandaa waqtaawaadha&apos;